पछिल्लो समय कि निकै चर्चित मोडल अन्जली अधिकारीको नया गीत सार्बजनिक भएको छ। गलबन्दीको गीत हीट भएपछी चर्चित बनेकी र पछिल्लो समय भ्याई नभ्याई भएकी मोडल अन्जली अधिकारीको नया गीत नाच दिदीबहिनी सार्बजनिक भएको छ। मेलिना राईको आवाजमा सजिएको गीत ‘नाच दिदिबहिनी’ मा अन्जली अधिकारीको नया रुप देखिएको छ। पहिलो पटक उनि म्युजिक भिडियोमा प्रहरीको भूमिकामा देखिएकी छिन ।
संगीतकार कलशी रोकायको भरेको संगीतमा मेलिना राईको स्वर बद्ध यस गीतलाई आरोही इंटरटेनमेंट स्टुडियो द्वारा निर्माण गरिएको हो। ड्रिम्स गेट इन्टरटेन्ट मेन्ट को युट्युब च्यानल मार्फत यस भिडियोलाई सार्बज्जनिक गरिएको छ। यस गीतमा अन्जली अधिकारी लगायत नबिता, नबिका, कैलाशका लगायतको अभिनय रहेको छ । नेपाल प्रहरिमा कार्यरत महिला कर्मचारीहरुको मर्मलाई समेटेर तयार पारिएको यस गीतमा अञ्जली महिला प्रहरीको भुमिकामा देखिएकी छिन । तीजको यस गीतमा महिला प्रहरीहरुलाई तीजको समयमा रमाईलो गर्ने रहर हुँदा हुँदै पनि ड्युटीमा खटिनु पर्ने बाध्यतालाई यश गीतमा देखाईएको छ ।
आजभोली अन्जली अधिकारीलाई म्युजिक भिडियोमा खेल्न भ्याई नभ्याई छ । हरेक दिन जसो उनको नया म्युजिक भिडियो सार्बजनिक हुने क्रम चलिरहेको छ भने दर्शकको अपार माया समेत पाएकी छिन । अनिश खत्रीको कोरियोग्राफ़ रहेको यस गीतको भिडियोलाई गौरव गिरीले निर्देशन गरेका छन्। यस गीतको भिडियोलाई सम्पादन ग्रिश रिजाल समिपले गरेका छन् । यस गीत उत्कृष्ट शब्द, स्वर र भिडियो क्वालीटीमा निर्माण भएको छ ।
भ्रस्ट र घुसखोरको समुह घुस दिन आए र प्रसारण नगर्न दबाब ! गरे रबिले खुलासा
सागर अालेको पहिलो कौरा गीत - भेट हुदा सोल्टिनी ( भिडियो सहित )
भाग्य न्यौपानेको हातबाट यति ठुलो सहयोग, हात खुटा गुमाएका कृष्णलाई नया जिबन ( भिडियो )
Previous Article भद्रगोलमा भित्रिइन मुन्नी , एकै भागमा चर्चित हुने को हुन् मुन्नी ? हेर्नुस भिडियोमा
Next Article आज राति दुर्लभ खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै , यी चारवटा राशीको भाग्य फेरिदै | कसलाई कस्तो प्रभाव – हेर्नुस